Ny fandresena vinavinaina ho lasan’ilay kandidan’ny mpanohitra sangany voampanga ho nanao kolikoly ao Nizeria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Febroary 2019 5:45 GMT
Naminavina ny fitsapan-kevitra nataon'ny Williams and Associates, fikambanana mpikaroka sy mpanadihady ao Etazonia fa handresy amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ao Nizeria ny 16 Febroary 2019 i Atiku Abubakar, kandidà mpanohitra avy ao amin'ny Antokom-bahoaka Demokratika (PDP). Abubakar sy ny filoha amperinasa Muhammadu Buhari ao amin'ny Kongresin'ny Liam-pandrosoana (APC) no mpifaninana roa lehibe indrindra amin'ilay fifaninanana.
Nanatontosa antsafa miisa 1.550 izay namoaka ny “elanelana 12% amin'ny vatom-pifidianana ho an'i Atiku raha mitaha amin'i Buhari” ny Williams and Associates ny 11 ka hatramin'ny 16 Janoary 2019.
Fantaro ireo kandidà ho filoham-pirenen'i Nizeria amin'ity taona 2019 ity [mg]
Efa antitra, kabarim-pankahalana, fahalalahan'ny gazety: lohahevitra goavana resahana amin'ny fifidianana filoham-pirenena 2019 ao Nizeria[mg]
Vao tsy ela no nitsidika an'i Etazonia i Abubakar (17 sy 18 Janoary 2019) efa ho folo taona lasa taty aoriana. Tafiditra amin'ny raharaha fanodikodinam-bola an -tapitrisany dolara maro nahatafiditra mpikambana iray ao amin'ny Kongresy Amerikana i Abubakar. Niampanga azy ho nanao famotsiam-bola sy nanao kolikoly ihany koa ny Komitin'ny Loholona Amerikana misahana ny fiarovam-pirenena sy ny raharahan'ny governemanta ao Etazonia. Nandeha be ny resaky ny olona maro noho izany fa voarara ny hitsidika an'i Etazonia izy
Nilaza ny Reuters fa “navoakan'ny Departemantam-panjakana Amerikana vonjimaika taorian'ny nikarakaran'ny laobista fanentanana” ity fandraràna an'i Abubakar ity. Nilaza tamin'ny Reuters ny loharanom-baovao iray tsy mitonona anarana fa navela hiditra an'i Etazonia i Abubakar satria